Dowlada Yeman oo Caalamka ku eedeysay in la ilaaway Qaxootiga Soomaalida ah ee jooga dalkaasi – Radio Daljir
Luulyo 11, 2013 4:03 b 0
Sanca, July 11- 2013 – Wasaarada arimaha debeda ee dalka Yeman ayaa walaac xoogan ka muujisay nolosha qaxootiga Soomaalida ah ee? ku sugan dalkaasi, xili haatan ay marxalad dhaqaale oo daran iyo mid amni oo wanaagsanayn ay ka jirto dalka Yeman.
Abu-bakar Abdullahi Al-Qirbi oo ah wasiirka arimaha debeda ee dalka Yeman wuxuu sheegay in dalkaasi ay ku sugan yihiin qaxooti gaaraya ilaa 1 Milyan oo Soomaali ah, kuwaasi oo u baahan daryeel kala gedisan iyo nolol.
Al-Qirbi wuxuu sheegay in beesha caalamka ay faraha ka qaaday la socodka xaalada Qaxootiga Soomaalida ah ee Yeman jooga, wasiirka ayaa intaas ku daray hadalkiisa in loo baahan yahay in caalamka u soo jeensado wax ka qabashada nolosha adag iyo daryeel la,aanta ay ku jiraan Soomaalida Yeman.
Xukuumada Yeman dhowaan waxaa ?ay ku dhawaaqday Guddi wasiiro ah, kuwaasi oo u kuur gelaya sida ugu haboon ee ?wax looga qaban karo nolosha qaxootiga Soomaalida ah ee dalkaasi Yeman.
Nolosha Qaxootiga Soomaalida ah ee ku nool dalka Yeman waxaa la sheegaa in ay yihiin kuwa aad u liita marka loo eego nolosha ay ku jiraan qaxootiga Soomaalida ah ee jooga dalalka deriska la ah Soomaaliya, sida Kenya iyo Ethopia.
Dalka Yemen dhanka xeebta badda cas deris kala ah Soomaaliya , ayaa xilligan waxaa uu ?ku jiraa ?xaalad dhaqaale oo aad u adag, iyadoo amniga waddanka iyo siyaasaduna ay tahay mid is barbar yaac weyn oo ka muuqdo.
Gaashaandhiga Soomaaliya Oo iclaamiyey in mushaarka ciidanka Dowlada si joogta ah loo bixin doono